Home / Toxic Positivity
▪️ဆိုကြပါစို့ ... တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို Parasite လိုရုပ်ရှင်မျိုးကို ကြည့်ပြီး ရယ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ? အောင့်သက်သက်ကြီး ဖြစ်နေမှာပဲနော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Parasite ကရယ်စရာကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားမှ မဟုတ်တာလေ။ အစကထဲက ရယ်မောစေချင်ရင် Comedy ဟာသရုပ်ရှင်မျိုးကို ကြည့်ခိုင်းရမှာပေါ့၊ မဟုတ်ဘူးလား။
▪️Toxic Positivity ဆိုတာ ဒီသဘောတရားနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ပျော်နေရမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကို လွှမ်းမိုးထားတာပါ။ တကယ်တမ်းကြတော့ အမြဲတမ်းပျော်နေဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ။ လူပဲလေ၊ စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့ အချိန်တွေရှိမယ်၊ လက်လျှော့အရှူံးပေးလိုက်ချင်တဲ့ အချိန်တွေရှိမယ်။ ဒါက ထုံးစံပါပဲ။ ဒီလိုပြောလို့ အကောင်းမြင်တတ်ခြင်းကို မကောင်းဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဆိုးထဲက အကောင်းကို ကြည့်တတ် မြင်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချိန်ထဲမှာပဲ ကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာအခက်အခဲတွေရဲ့ အရင်းအမြစ် အကြောင်းရင်းခံကို ရှာဖွေတွေးတောတတ်တဲ့ ယုတ္တိကျကျ ဆင်ခြင်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းကိုလည်း လိုအပ်ပြန်ပါတယ်။
▪️ ဒီ Optimism နဲ့ Logical thinking ဟာမျှတမှုမရှိဘဲ တရားလွန်အကောင်းမြင်ခြင်းက လွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါ Toxic Positivity ဖြစ်သွားပြီး ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးတွေ ပိုဖြစ်လာစေတော့တာပါပဲ။
▪️ဥပမာတစ်ခုပြောရရင် သင့်မှာစိတ်ညစ်စရာရှိတဲ့အခါတိုင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ရင်ဖွင့်တယ်ဆိုကြပါစို့။ သင့်အခက်အခဲတွေကို ပြောပြတဲ့အခါတိုင်း သူငယ်ချင်းက "အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့" "ဘာလို့စိတ်ညစ်နေမှာလဲ၊ ပျော်ပျော်သာနေ" "စိတ်ထဲထည့်မနေနဲ့" "ကံပဲပေါ့ကွာ" ဒီလိုစကားမျိုးတွေသာ ပြောနေမယ်ဆိုရင် သင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။
▪️ဒီဖြစ်ရပ်လေးကို တွေးကြည့်ရအောင်နော်။ ဖြစ်နိုင်တာက နောက်ပိုင်း သင့်ခံစားချက်တွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှ ထုတ်ပြောဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ကြာလာတော့ စိတ်ညစ်ဖို့၊ ဝမ်းနည်းဖို့တောင် သင့်ကိုယ်သင် မလုံမလဲဖြစ်လာမယ်၊ အပြစ်ရှိသလို ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရော သိသိသာသာဖြစ်စေ၊ မသိမသာဖြစ်စေ Toxic Positivity ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကို ဘယ်လောက်ထိ ခံနေရပြီလဲ? ဒါစဉ်းစားစရာပါပဲ။
▪️Social animals တွေဖြစ်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ ကျင်လည်ရှင်သန်နေသမျှ ခံစားချက်မျိုးစုံနဲ့ ထိတွေ့နေရမှာပါပဲ။ ပျော်ရွှင်မှုကိုချည်း ခံစားမယ်လို့ ပုံသေသတ်မှတ်ထားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
▪️အကောင်းမြင်တတ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်နေရမယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေပေါ်မူူတည်ပြီး အဆိုးထဲက အကောင်းကို ရှာဖွေကာ စိတ်သက်သာရာရအောင် နေတတ်ဖို့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်စရာရှိတဲ့အခါ စိတ်ညစ်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင်တော့ ခေါင်းအေးအေးနဲ့ အဖြေကိုရှာဖွေပါ။ ဝမ်းနည်းတဲ့အခါ ငိုချလိုက်ပါ၊ ပြီးရင်တော့ စိတ်အေးအေးနဲ့ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာကို ဆက်လက်ကြိုးစားပါ။
▪️ အမြဲရယ်မောပျော်ရွှင်နေရမယ်လို့ သင့်ကိုယ်သင် သတ်မှတ်ထားစရာမလိုပါဘူး။ ခံစားမှုတွေကို ပိတ်ပင်ထားစရာမလိုပါဘူး။ It's OK not to be OK ဆိုတဲ့အချက်ကို လက်ခံနားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တု့ိအားလုံး Toxic Positivity ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမှ ကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေ။